Baarlamanka Soomaaliya oo maanta loo qeybiyey hindise sharciyeedyo badan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baarlamanka Soomaaliya oo maanta loo qeybiyey hindise sharciyeedyo badan
22nd October 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Xildhibaannada Golaha shacabka Soomaaliya ayaa manta loo qeybiyey xisaab xirka miisaaniyaddii ay horey u ansxiyeen ee dowladdu ku shaqeyneysay sanadkii tagay ee 2013-ka, waxaana xisaab xirka miisaaniyaddaasi u soo gudbiyey baarlamaanka maanta guddiga maalliyadda ee baarlamaanka.
Sidoo kale, waxaa maanta baarlamaanka loo qeybiyey dhiwr hindise sharciyeed oo kala ah:
1- Hindise Sharciyeedka Xeerka Isgaarsiinta Qaranka
2- Hindise Sharciyeedka Liisamada Ganacsiga iyo Warshadaha
3- Hindise Sharciyeedka Magacyada iyo Sumadaha Ganacsiga
4- Hindise Sharciyeedka dib u eegista sharcigii Janaayo 1989kii ee lagu dhisay hay’adda duulista rayidka iyo saadaasha hawada.
5- Dib u eegid Hindise Sharciyeedka Iibka Qaranka
6- Heshiis ku saabsan xuquuqda Carruurta oo uu aqbalay golaha guud ee QM 20-kii November 1989-kii.
7- Hindise Sharciyeedka la dagaalanka argigixisada oo ka kooban 36 qodob.
Qeybinta Hindise Sharciyeedyadaasi kadib waxa ay Xildhibaannada Baarlamaanku gudagaleen akhrinta Koobaad ee Hindise Sharciyeedka Hanti Dhowrka Guud ee Qaranka waxaana Xildhibaannada hor yimid oo ay hindise Sharciyeedkaasi su’aallo ka weydiiyeen Hanti dhowrka Guud ee Qaranka Dr. Nuur Jimcaale Faarax waxaana ay weydiimaha Xildhibaannadu ku qotomeen sharciyada aas aaska u ah Hanti Dhowrka Guud ee Qaranka.
Dr Nuur Jimcaale Faarax Hanti Dhowrka Guud ee Qaranka ayaa markii uu uga jawaabay Xildhibaannada Baarlamaanka su’aallaha ay weydiiyeen isla markaana uu ka dhageystay tallooyinka ay qabaan waxaa uu ka codsaday Xildhibaannada Golaha Shacabka inay meel mariyaan Hindise Sharciyeedkan maadaama Dalkeennu ka mid yahay dalalka caalamka ee lagu tilmaamo inuu musuq maasuqu ku xoogaystay.
Su’aallo weydiinta Hanti Dhowrka Guud ee Qaranka ayey Xildhibaannadu sii ambaqaadi doonaan maalinnimada sabtida ah ee soo socota waxaana dhanka kale dib loo dhigay maanta u codeynta Sharciga Kalluumeysiga kadib markii loo waayey tirada xildhibaannada u codeyn lahaa sida uu gebagebadii shirka kaga dhawaaqay Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Sawirro: Arday jaamacadeed oo soo saaray qaab cusub oo loo beeri karo cowska